Trump ‘oo haya’ caddeynta halka uu ka yimid Coronavirus – Radio Damal
Trump ‘oo haya’ caddeynta halka uu ka yimid Coronavirus
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii ugu hanjabay Shiinaha canshuur cusub, isaga sheegay inuu arkay caddeymo muujinaya in cudurka Coronavirus uu ka yimid shaybaar ku yaalla magaalada Wuhan.
Fayruskan ayaa waxaa la rumeysan yahay inuu sanadii tegtay kasoo billowday suuq xoolaha lagu qalo oo ku yaalla magaalada Wuhan, hase yeeshee waxaa jira warar suuqeed sheegayey inuu kasoo baxsaday shaybaar sir ah oo ku yaalla Wuhan.
Mar waxa laga weydiiyey haddii uu arkay wax caddeymo ah, oo lagu kalsoonaan karo oo muujinaya in fayruska uu kasoo billowday Machadka Fayruska ee Wuhan, ayaa Trump waxa uu ku jawaabay “Haa, waan hayaa.”
Mar weriyayaasha ay ku cadaadiyeen sababta uu taas ugu kalsoon yahay, ayaa Trump waxaa uu yiri “Taas kuuma sheegi karo.”
Trump ayaa isku dayaya inuu sida ay Shiinaha ula tacaaleen dillaaca cudurkan ka dhigo arrinta ugu weyn ololihiisa dib u doorashada.
Mar waxa laga weydiiyey inuu nasakhi doono daynta ay Shiinaha ku leeyihiin Mareykanka, Trump waxa uu ku jawaabay inuu taas u sameyn karo si kale.
“Taas waa sameyn karaa, balse xitaa lacag kale oo badan ayaan ka qaadi karaa, aniga oo saaraya canshuur dheeri ah,” ayuu yiri madaxweyne Trump.
Inkasta oo bishii Janaayo ay heshiis ka gaareen dagaalkii ganacsiga, ayaa haddana weli saddex meelood laba maal canshuurihii ay isku soo rogeen Beijing iyo Washington ay weli yihiin kuwa halkoodii jooga.
Weerarka cusub ee Trump uu ku qaaday Shiinaha ayaa imanaya ayada oo xog cusub ay muujineyso in cudurka Coronavirus uu horseeday in 30 milyan oo qof ay ku shaqo waayaan dalka Mareykanka, sababo la xiriira xayiraadaha la soo rogay
Shaqo la’aanta iyo dhaqaale xumada ayaa aad u wiiqeysa rajada madaxweyne Trump uu ka qabo in dib loogu doorto xafiiska doorashada dhaceysa 3-da November.